Finfinneetti har’a balaan Ibiddaa mudate – Welcome to bilisummaa
Finfinneetti har’a balaan Ibiddaa mudate
Finfinnee Muddee 01,2007(FBC) Balaa Ibiddaa har’a magaalaa Finfinneetti mudateen iddoowwan daldalaafi manneen jireenyaa irratti miidhaan akka ga’e himame.
Itti gaafatamaan sab-quunnmatii abbaa taayitaa ittisa balaa Ibiddaa bulchiinsa Magaalaa Finfinnee obbo Nigaatuu Maammoo akka himanitti balaan kun kan mudate iddoo piyaasaa jedhamuudhaan beekamutti.
Balaa kanaan manneen gurgurtaa warqeefi manneen jireenyaa naannichatti argaman akka miidhaman obbo Nigaatuun himaniiru.
Hojjettoonni ittisa balaa Ibiddaa abbaa tayitichaa balaa kana too’annoo jala oolchuuf carraaqqii taasisaniin balaan Ibiddaa kun akka hin babal’anne taasisuu isaaniis himaniiru.
Wayita ammaas hojiin ittisaa itti fufee akka jiruufi balaan kun guutummaatti too’annoo jala akka hin oolle obbo Nigaatuun himaniiru.
Miidhaan balaa kanaan mudate hanga ammaatti hin beekamne.
Tags Balaa ibiddaa Finfinnee
Previous ETHIOPIA: Outbreak of Deadly Disease in Jail, Denial of Graduation of University Students
Next Ethiopia-Kenya pact targets communities at the border